Mallattoo Oromummaa: Namni dhukkubnisaa hinbeekamin qoricha argachuu hindanda’u. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMallattoo Oromummaa: Namni dhukkubnisaa hinbeekamin qoricha argachuu hindanda’u.
Mallattoo Oromummaa: Namni dhukkubnisaa hinbeekamin qoricha argachuu hindanda’u.
Namni dhukkubnisaa hinbeekamin qoricha argachuu hindanda’u.
Oromiyaatti waan dhukkuba ta’ee yeroo hunda mallattoo Oromummaa isa ta’e Afaan Oromoo harkatti adamsu, gamtokkoon ‘Koomishinii’ hundeessaa gama biraan Oromootaa fi mooraa qabsoo Oromoo malaan burjaajessuuf yaaluudhaan isa Oromiyaa diiguuf foolatu sirriitti qulqulleessinee ilaaluun baay’ee murteessaadha. Oromo, dhaabbata siyaasaa imaanaa ati dhiiga kafaltee itti kennite nyaate gaafa beekte, adeemsa keessa qaawwaa uumameen hulluuqee maqaa keetiin eenyu akka Muummicha Ministraa akka ta’ee yoo hubatte ta’e, ‘fact’ kana irrattimmoo waliigaltee uumuu gaafa dandeesse fallikee achi irraa eegala. Kanaan alatti takka Ministeera Barnootaa, takka BBO yamaaliyyoo jennee asii fi achi naanna’uun hinbaasu. Walgowwoomsaa ooluu taati. Isa fira fakkaatee balbala banee diina ol sitti naquuf ka’e beekta, isuma kokkee qabi. Kanuma.
Mee ibsa gabaabduu maqaa BMNOtiin ba’e kana qalbifadhaa ilaalaa, waanan jedheefan qaba.
Sirni barnootaa jijjiiramuu waliin walqabatee gaaffii ka’e maali? Maaliif fedha uummataan alatti አማርኛn dura Kutaa 5 irraa eegalu amma akka Kutaa 1 irraa eegalu taasifama kan jedhudha. Ibsa kennamemmoo ilaalaa, tasa maqaa gaaffii kanaa hindhayu, lagatee bira darbe. Kun eenyummaa OPDOti.
BMNO lubbuun jira gaafa ta’e gaaffii ijoo isa gaafatame deebisuu qaba. አማርኛn Kutaa 1 irraa ka’ee akka barsiifamu maaliif barbaachise? Eenyutu murteessee? Dhuguma warri amma ibsa baasan kun yeroo murtoon kun darbu quba hinqabanii? Maaliif walsobna?
ዝምታው ይሰበር!!ፋን ኦሮሞ ተጨማሪ የፌዴራል መንግስት የስራ ቋንቋ እንዲሆን እና..